အပွနျအလှနျ - Owl Myanmar News
ကမြဟာ ကိုကို့ကို သိပျခဈြတယျ။ အသညျးထဲစှဲအောငျကို ခဈြတာရှငျ့..။ ကိုကိုက သိပျကွငျနာတတျတာလေ။ ဒါကွောငျ့လညျး ကမြက အခဈြပိုရတာပေါ့..။ ကိုကို့ကို ကမြက အမွဲတမျး တမျးတနတော။ သတိရနတော..။ လှမျးနတော..။ ကိုကိုနဲ့ မတှရေ့တဲ့အခြိနျတှဆေို ရငျ ကိုကိုနဲ့ ခဈြကွတာတှေ ပွနျတှေးပွီး ရငျထဲမှာ လှိုကျဖိုလာရော..။ ကိုကိုနဲ့ ခဈြကွတာတှကေလညျး သိပျကွညျနူးဖို့ကောငျးတာ..။ သိပျ အားရ ကနြေပျစရာလညျး ကောငျးတယျလေ..။ ကမြက သူငယျခငျြးနဲ့ အတူနတေယျ။ သူကလညျး သူ့ရညျးစားဆီကို ကြောငျးပိတျရကျဆို သှားနတောမြားတယျ။ သောကွာနညေ့ ဆို သူက သူ့ရညျးစားဆီသှားပွီ။ တနင်ျလာနကေ့မြှ သူက ပွနျလာတာ..။ သူကလညျး သူ့ရညျးစားအိမျမှာ နှဈပါးသှား။ ကမြကလညျး ကမြ ကိုကိုနဲ့ နှဈပါးသှားကွတာလေ..။ သောကွာနညေ့ဆို ကမြရဲ့ ကိုကိုက ရောကျလာပွီ။ နှဈယောကျသား ခဈြဗြူဟာတှေ ခငျးကွတာမြား.. အားရပါးရပေါ့။ ကမြရဲ့ အခနျးဖျေါနဲ့ တနင်ျလာနညေ့ဆိုရငျ သူ့အတှအေ့ကွုံ ကိုယျ့အတှအေ့ကွုံ ဖလှယျကွတာမြား ပြျောစရာကွီး။ ။သူကလညျး သူ့ရညျးစားက သူ့နို့လေးကို ဘယျလို ဆို့လိုကျတာ..။ အခုထိ နို့ကလေးတှမှော ရဲနတောပဲ.. ဒီမှာကွညျ့ပါဦးဆိုပွီး သူ့ နို့လေးနားမှာ သူ့ရညျးစား ကဈဈ ထားလို့ ရဲရဲလေးတှေ ဖွဈနတောကို ပွတတျတယျ။ ကမြကလညျး အားကမြခံပေါ့..။
အံမယျ ငါ့ကိုကိုက လညျး ငါ့ကို အခဈြကွီးလိုကျတာ ဒီမှာတှလေ့ားဆိုပွီး ပွနျပွတာပေါ့။ တခါတလမြေား အဲဒီလို ပွကွရငျး တယောကျနို့လေး တယောကျစမျးကွညျ့ ပှတျသကျရငျး စိတျတှေ ဖေါကျဖေါကျလာလို့.. တကယျပါ.. သူ့စောကျပတျလေးကို ကမြက လကျြပေးလိုကျ.. ကမြ စောကျပတျလေးကို သူက လကျြလိုကျ၊ ပှတျလိုကျနဲ့.. တခါတလမြေား စောကျရညျလေးမြား ကလြာတဲ့အထိပဲ…။ ထားပါတော့.. အဲဒီအကွောငျးကို နောကျမှ ပွောပွမယျနျော။ အခုတော့ ကမြကိုကိုနဲ့ ကမြတို့အကွောငျးကိုပဲ ပွောမယျ။ အငျး… ကနျြတာတှတေော့ ပွောမနတေော့ပါဘူး။ သူနဲ့ကမြတို့ ခဈြပှဲဝငျ ခဈြရညျလူးကွတာတှပေဲ ပွောတော့မယျ။ ရှငျတို့စိတျဝငျစားကွတာလဲ ဒါပဲ မ ဟုတျလား။ ပွောပွမယျ။ နားထောငျနျော။ သောကွာနညေ့ဆို ကိုကိုရောကျလာပွီ။ ကိုကိုလာတဲ့အခါ မြားသောအားဖွငျ့ ကိုကိုက စားစရာတှေ ဝယျလာကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါတှကေို ကမြတို့တော့ ခကျြခွငျးမစားဖွဈပါဘူး။ ကိုကိုလာတာနဲ့ ကမြကို လှမျးဖကျလိုကျတာပဲ..။ ‘ခဈြလေးရေ.. လှမျးလှပွီကှာ.. ‘ ဆိုပွီး ကမြပါးလေးတှကေိုနမျးလိုကျ၊ နှုတျခမျးလေးတှကေိုနမျးလိုကျ။ နောကျတော့ တဖွညျးဖွညျး နဲ့ ကမြရဲ့နားကလေးတှကေို လြှာကလေးနဲ့ လကျြပေးရငျး ကမြရဲ့ ရငျသားဖေါငျးအိအိလေးတှဆေီ ကိုကိုလကျက ရောကျလာတာပဲ။
ကမြက လညျး ကိုကိုလာရငျ လိုးကွမယျ ဆိုတာကွောငျ့ အမွဲတမျး ရမေိုးခြိုးပွီးတာနဲ့ ညဝတျအင်ျကြီ ပါးလေး ဝတျပွီး စောငျ့နတောလေ။ ဆိုတော့ အတှငျးခံတှေ ဘာတှေ ဘာမှ ဝတျထားတာမဟုတျဘူး။ ကိုကိုရောကျလာပွီး ကမြကို ဖကျလိုကျပွီး အဲဒီလို နမျးပွီး နို့ကလေးတှကေို ပှတျသကျရငျး ဖတျထားတဲ့အခါမြား ကိုကို့လီးကွီးက ဂငျြးဘောငျးဘီကွားက ရုနျးထှကျဖို့ကွိုးစားရငျး ကမြရဲ့ စောကျပတျလေးကို လှမျးထိနပွေီလေ။ အဲဒီကတညျးက ကမြကလညျး စိတျတှကေ ပါလာရော..။ နောကျ ကမြကို ဖတျပွီး ကိုကိုက အခနျးထဲကို အနမျးမပကျြ ရှသှေ့ားပွီး ကမြရဲ့ အိပျယာပျေါကို ပဈလှဲလိုကျတယျ။ နောကျ ကမြ ရဲ့ အင်ျကြီကို လှနျတငျပွီး ကမြရဲ့ အိစကျဖေါငျွး<ှကနတေဲ့ နို့ကလေးတှကေို အငမျးမရ စို့ပါလရေော။ ခပျဖှဖှလေး စုတျလိုကျ၊ လြှာကလေးတှေ နဲ့ ရငျသားတလြှောကျ တို့ကစားလိုကျ၊ နို့သီးခေါငျးကလေးကို ငုံစို့လိုကျနဲ့ လုပျလိုကျရငျ ကမြမှာ အလိုးခံခငျြစိတျတှေ တဖှားဖှားဖွဈလာရော။ ကိုကိုနဲ့ကမြက လိုးနကြေ လငျမယားတှလေို ဖွဈနတေော့ ကမြကတော့ မရှကျတော့ပါဘူး။ ကိုကို့ဘောငျးဘီကွယျသီးကို လှမျးဖွုတျပွီး ကိုကို့ လီး နှေးနှေးလေးကို လှမျးကိုငျလိုကျတာပဲ။ ကိုကိုကလညျး သူ့ဘောငျးဘီကို လြှောခြ ခြှတျလိုကျပွီး ကမြခဈြတဲ့ သူ့လီးကွီးကို ပေးကိုငျတာပဲ။ သူကလညျး ကမြစောကျပတျလေးကို လှမျးထိလိုကျတယျ။ နောကျ စောကျမှေးလေးတှပေျေါမှာ မထိတထိ တို့ကစားရငျး ကမြကို ဝတျလဈ စလဈ ဖွဈအောငျ လုပျလိုကျတာပဲ။ သူကလညျး အဲဒီအခြိနျဆို ဝတျလဈစလဈကွီးပဲလေ။ ကမြက ကိုကို့လီးကို သိပျကွိုကျတာ။ အငျးလေ.. မိနျးကလေးဆိုတာ မပွောရငျသာ ရှိမယျ။ လီးဆိုရငျ ကွိုကျတာခညျြးပါပဲ။ ယောကျြား တှလေညျး ဒီအတိုငျးနမှောပဲနျော။
စောကျပတျလေးမြားဆို သိပျလိုးခငျြကွမှာပဲ။ ကမြကတော့ အရငျဆုံး ကိုကို့လီးကို ပှတျကစားရငျး စိတျတှေ ကွလာရငျ ငုံခငျြ စုတျခငျြစိတျတှေ ဖွဈလာရောလေ။ ကိုကိုကလညျး ကမြရဲ့ ပေါငျတံလေးတှပေျေါ သူ့လကျကလေးတှနေဲ့ ပှတျကစားရငျး ကမြရဲ့ စောကျမှေးလေးတှကေို တို့ထိလိုကျ။ စောကျပတျလေးကို ခပျ ဖှဖှလေး အုပျရငျး ပှတျပေးလိုကျနဲ့..။ သူ့လီးကွီးကလညျး တောငျနတောပဲ..။ အဲဒီလိုမြိုးဖွဈတဲ့အခါ ကိုကိုက လှဲအိပျပွီး ကမြက သူ့အပျေါ ခှထိုငျပွီး သူ့လီးကို လှမျးစုတျလိုကျတာပဲ။ ကမြရဲ့ စောကျပတျ ဖေါငျး ဖေါငျးလေးတှကေလညျး ကိုကို့မကျြနှာနားရောကျနပွေီလေ..။ ”ခဈြရယျ.. ခဈြ စောကျပတျလေးက သိပျကောငျးတာပဲ။ ဒီစောကျပတျလေးကို မှုတျခငျြလှပွီကှ..’ ဆိုပွီး ကမြစောကျပတျကလေး တှကေို သူ့လြှာလေးနဲ့ လှမျးလကျြပါလရေော။ လြှာနုနုလေးတှနေဲ့ ကမြ စောကျပတျ အနားလေးတှတေလြှောကျ မှကေစားလိုကျရငျ အမလေး အသညျးထဲ အေးကနဲ အေးကနဲပေါ့ရှငျ။ ဘယျလိုကောငျးမှနျးမသိဘူး။ နောကျ ကိုကိုက သူ့လကျလေး ၂ ဖကျနဲ့ ကမြရဲ့ စောကျပတျ အနားလေးတှကေို ဖွဲပွီး စောကျစိလေးကို လြှာကလေးနဲ့ လှမျးလှမျး ထိုးလိုကျရငျ အသညျးထဲ အေးကနဲကို ဖွဈသှားပွီး ကမြမှာ မွောကျတကျသှားသလား ထငျရတယျ။ အဲဒီအခါမြိုးမှာ ကမြကလညျး ကိုကိုရဲ့ လီးကွီးကို ပှတျပေးရငျး လီးကွီးရဲ့ အရညျပွားလေးကို စှဲခပြွီး ပွောငျပွီး မာနတေဲ့ ဒဈကွီးကို လြှာကလေးနဲ့ ဖှဖှလေး လိုကျတို့ ကစားလိုကျ တယျ။ ပွီးတော့ အဲဒီ လီးကွီးကို ဆုပျနယျပွီး အထကျအောကျ ကစားပေးရတာလညျး တမြိုးကောငျးတာပဲ။ သူ့လီးကွီးကို ကိုငျထားရငျး အသညျးယားလာတာမို့ လကျတဖကျနဲ့ ခပျတငျးတငျးလေး ဖိဆုပျပွီး အောကျကို ဆှဲခလြိုကျ အထကျကို ပွနျတငျပွီး ဂှငျးတိုကျပေးတယျ။
လီးထိပျ အသားနုနု နီတာရဲလေးကိုတော့ ကမြမှာ ငုံထားရတာ တကယျ့အရသာပါပဲ။ သူ့လီးကွီးတောငျနတောကို ကမြက လြာကလေးနဲ့ ငုံ လကျြပေးလိုကျရငျ သူလညျး ”အား.. ကောငျးလိုကျတာ ခဈြရာ.. ခဈြက သိပျကောငျးတာပဲ.. အဲဒီလို ကိုကို့လီးကို မှုတျပေးတာ သိပျကောငျးတာပဲ.. အား.” ဆိုပွီး ဖွဈလာတာပဲလေ။ ပွောလညျးပွောရငျး ကမြစောကျပတျကိုလညျး မှုတျရငျးပေါ့။ ကမြကလညျး သူ အဲဒီလိုပွောပွီး ကမြစောကျပတျလေးထဲ လကျကလေးသှငျးပွီး စောကျစိကို လြှာကလေးနဲ့ ခပျကွမျးကွမျးလေး မြား ကစားလိုကျရငျ အရမျးကောငျးသှားလို့. ”အို.. အား.. အား… ကောငျးလိုကျတာ.. ကိုကိုရယျ.. အမလေး.. ခဈြရဲ့ စောကျပတျလေးက ကောငျးလားဟငျ” လို့ ပွနျမေးမိရော ကိုကိုကလညျး.. ”ခဈြရယျ.. အရမျးကောငျးတာပဲ.. ခဈြရဲ့ စောကျပတျ အနားလေးတှကေလညျး လှလိုကျတာ.. အထဲက အသားလေးတှကေလညျး ပနျးနုရောငျလေးတှေ.. နုဖတျပွီး စောကျရကြေဲကလေးတှနေဲ့ လြှကျလိုကျရတာ အရသာ သိပျရှိတာပဲ.. အကွာကွီး လကျြပါရစဦေးနျော.. ” ”အို.. ကိုကိုကလဲ… ” ”’လကျြလို့ မဝလို့ပါကှာ.. ခဈြစောကျပတျလေးက သိပျကောငျးတယျ” ”ပိုပွီ.. သူမြားစောကျပတျတှလေညျး ဒီအတိုငျးပဲ ဟာကို” ”အို.. မတူဘူးကှ.. ကိုကို လိုးခဲ့ဖူး၊ မှုတျပေးခဲ့ဖူးတဲ့ စောကျပတျတှထေဲမှာ ခဈြရဲ့စောကျပတျလေးကို လြှကျပေးရတာလညျး သိပျ ကောငျးတယျ။ လိုးရတာလညျး အရမျးကို ကောငျးတာ..” တဲ့လေ တကယျတော့ ဒီအခြိနျမြိုးမှာ ဒီလိုအတှမြေိုးရှိတာ အကောငျးဆုံးမဟုတျလား။ ကွားရတာ သိပျကောငျးတာပဲလေ။ ဒါကွောငျ့ ကမြ ကလညျး အလိုကျသတိနဲ့.. ”ခဈြကတော့ ကိုကို့လီးကိုပဲ အလိုးခံဖူးတာနျော။ ကိုကို့လီးနဲ့ အလိုးခံရရငျ အားလုံးပွညျ့စုံသှားပွီ…” လို့ ပွနျပွောလိုကျတာပဲ။ တကယျတော့ တခွား ဘယျလောကျပဲ အလိုးခံခဲ့ဖူးဖူး လကျရှိလိုးပေးမယျ့သူ စိတျခမျြးသာဖို့ ပွောရတာပဲလေ။
ဒါမှ ၂ ယောကျလုံး ပိုပွီး ကာမ အရသာ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ ခံစားရမှာပေါ့နျော။ ဒီလိုနဲ့ ကမြတို့က အပွနျအလှနျ မှုတျပေးကွပွီးရငျ ကိုကို့လီးကွီးနဲ့ ကမြစောကျပတျတို့ လိုးခငျြစိတျတှေ တဖှားဖှားဖွဈလာရောလေ။ အဲဒီအခါ ကိုကို ကမြအပျေါကို တကျလိုကျရော။ ကမြကလညျး အလိုကျသငျ့ ပေါငျကလေးကို ဖွဲပေးတာပေါ့။ ကိုကို လိုးခငျြစိတျတှေ ပိုဖွဈလာအောငျလညျး.. ”ကိုကို.. လိုးတော့ကှာ… ခံခငျြလာပွီ..” ”အငျး.. လိုးမယျနျော.. ခဈြ.. ခဈြရဲ့ စောကျပတျလေးထဲကို ကိုကို့လီးကွီးထညျ့လိုကျမယျနျော..” ”အငျး.. ထညျ့လိုကျနျော.. ကိုကို့လီးကွီးက တောငျနတောပဲကှာ..’ ”အငျးလေ.. အဲဒါ ခဈြရဲ့ စောကျပတျလေးကို အရမျးလိုးခငျြလို့ပေါ့..” ”ကိုကို့လီးကွီးက သိပျကောငျးတာပဲ.. ခဈြတော့ အရမျးစှဲနပွေီကှာ..” ”ကိုကိုလညျး အတူတူပဲကှ.. ခဈြစောကျပတျလေးထဲကို ကိုကိုလီးကွီး ထညျ့လိုကျမယျနျော” ”အငျး.. ထညျ့လိုကျ.. အမလေး.. ”အား.. ရှီး.. ကောငျးလိုကျတာကိုကိုရယျ.. အထဲကို ဝငျသှားပွီ” ”အငျး.. ကိုကို့လီးထိပျကွီးက ခဈြရဲ့စောကျပတျထဲ ရောကျနပွေီကှ..” ”အို.. အား.. ကိုကို့လီးကွီးကလညျး အပွငျကထကျ ပိုပွီး ကွီးလာသလိုပဲ” ”အပွငျကထကျ..” ”အငျးလေ… ခဈြစောကျပတျထဲမှာ ကိုကို့လီးကွီးဝငျနတော တငျးကပျြနတောပဲကှာ..” ”ခဈြ .. နညျးနညျး ထပျသှငျးလိုကျပွီကှာ…” ”အိုး… အမလေး.. အား.. ကောငျးလိုကျတာ.. ထညျ့ထညျ့. .. အဆုံးထိသာ ထညျ့လိုကျကှာ.. အရမျးကောငျးတယျ အမလေး..” ”အား…. ကောငျးလိုကျတာ ခဈြရာ… စပွီး လိုးတော့မယျနျော..” ”အငျး.. လိုး.. ဖွညျးဖွညျးလေးနဲ့ ငွိမျ့ငွိမျ့လေး လိုးနျော…” ”အငျး…. အား… ကောငျးလိုကျတာ ခဈြရာ..”’ အဲဒီလိုတှေ ပွောပွီး ကိုကိုက ကမြ စောကျပတျကို စလိုးတော့တာပဲ။
သိပျကောငျးတယျ။ တကယျပဲ ဒီလောကျ ကောငျးတဲ့ စညျးစိမျ ဘယျရှိမလဲနျော။ ကိုကိုက လိုးရငျးနဲ့ တဖွညျးဖွညျး ပိုမွနျလာတဲ့အခါ ကမြလညျး စောကျပကျလေးထဲ သူ့လီးကွီး မြားမြားဝငျအောငျ ပေါငျကို ကယျြကယျြလေး ကားပေးတာပေါ့။ သူကလညျး အပျေါကနေ စောငျ့လိုးနတော အားမရလို့လားမသိဘူး။ ကမြရဲ့ နို့ နှဈဖကျကိုလညျး လှမျးကိုငျပွီး စောငျ့စောငျ့လိုးတော့တာပဲ။ အားရပါးရကို လိုးတာ။. ကမြလညျး ခံလို့ကောငျးလိုကျတာ ပွော မနနေဲ့..။ ”အား.. အရမျးလိုးခငျြတယျကှာ။ အရမျးလိုးနတေယျနျော” ”အငျး. လိုး.. လိုး.. ဒီစောကျပတျလေးက ကိုကို့အတှကျနျော..။ တသကျလုံး လိုးမှာလား..” ”လိုးမှာပေါ့ ခဈြရ.. ခဈြရဲ့ စောကျပတျလေးကို လိုးရတာ ဘယျတော့မှ အား၇တယျမရှိဘူး..” ”ကဲ.. ဒါဆို အားရပါးရလိုးနျော” ”လိုးမယျ.. လိုးမယျ.. ဒီတခြီပွီးသှားရငျ နောကျတခြီ လိုးမယျ။နောကျတခြီ ပွီးရငျ နောကျတခြီနျော..” ”ဘာလုပျမှာလဲ ကိုကိုရဲ့..” ”လိုးမှာလေ.. ခဈြရဲ့ စောကျပတျကို ကိုကို့ရဲ့ လီးကွီးနဲ့ အားရပါးရ လိုးမယျကှာ..” ”အား.. လိုး ကိုကို လိုးသာလိုး. ကိုကို့လီးကွီးနဲ့ လိုးလို့ကတော့ ခဈြက အမွဲတမျး ခံမယျနျော။ ကိုကိုစိတျတိုငျးကြ လိုးနျော..” ”အား.. ကောငျးလိုကျတာ ခဈြရာ.. ” လို့ ပွောရငျး ကမြရဲ့ ပေါငျတဖကျကို သူ့ပုခုံးပျေါ ထမျးရငျး သူ့လီးကွီးနဲ့ ကမြရဲ့ စောကျပတျကို တဖုတျဖုတျနဲ့ လိုးပါလရေော..။ ခံလို့ကောငျးလိုကျတာရှငျ..။ နောကျတျောတျောကွာတော့ သူလညျး မောလာတာပေါ့။ အဲဒီအခါ ”ကိုကို မောနပွေီလား။ ခဈြ အပျေါက တကျစောငျ့ပေးမယျနျော..” ”အငျး.. အဲဒီလို အလိုကျသိတတျလှနျးလို့ ခဈြကို ပိုပွီးခဈြရတာ..” လို့ သူက ပွောရငျး ကမြပါးလေးကို နမျး၊ နှုတျခမျးလေးကိုနမျးရငျး ဘေးမှာ လှဲအိပျလိုကျတယျ။
ဒီတော့ ကမြ လညျး သူ့အပျေါ ခှတကျလိုကျပွီး အပျေါကို ထောငျနတေဲ့ သူ့လီးတောငျတောငျကွီးကို လှမျးကိုငျပွီးကမြရဲ့ စောကျပတျနဲ့ တပွေီ့း ထိုငျခလြိုကျတယျ။ သူ့လီးကွီးက ကမြရဲ့ စောကျပတျထဲကို စှပျကနဲ ဝငျသှားပါလရေော..။ ‘အား.. ကောငျးလိုကျတာ ခဈြရာ..” ‘ကိုကို.. ခဈြလိုးတော့မယျနျော..” ”လိုး.. လိုး.. အားရပါးရလိုး.. အပျေါက တအားသာ စောငျ့နျော..” ”အငျး. စောငျ့မယျ… ခဈြရဲ့ စောကျပတျလေးနဲ့ ကိုကိုလီးကွီးပျေါကို တအား စောငျ့လိုးမယျကှာ..” ”အငျး.. လိုးသာလိုး ခဈြ..” ဆိုပွီး ကမြလညျး သူ့လီးကွီးအပျေါမှာ ခှထိုငျပွီး တစှပျစှပျနဲ့ စောငျ့ပေးလိုကျတယျ။ သူကလညျး အောကျမှာ ဇိမျ တှနေ့တေဲ့အပွငျ ကမြရဲ့ နို့ကလေးတှေ ခုနျဆှ ခုနျဆှ ဖွဈနတောကို လှမျးလှမျးဆှဲလိုကျသေးတယျ။ ကမြလညျး စိတျရှိ လကျရှိ အားရပါးရ သူ့လီးကွီးပျေါ စောငျ့စောငျ့ပွီး လိုးပဈလိုကျတယျ။ သိပျကောငျးတာပဲ။ ကမြလညျး စောငျ့ကောငျးကောငျးနဲ့ စောငျ့လိုကျတာ အဲယားကှနျးဖှငျ့ထားတဲ့ အခနျးထဲမှာ ခြှေး ပွနျတဲ့အထိပဲ။ အဲဒီအခါကတြော့ ကမြလညျး မောပွီး ကိုကို့အပျေါ လှဲအိပျလိုကျတယျ။ ကိုကိုကလညျး ကမြကို လှမျးဖကျ ထားပွီး ဘေးကိုစောငျးလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ”နောကျကနေ လိုးဦးမယျခဈြရာ.. ဖငျကုနျးပေးထားနျော..” ”အငျး.. ကိုကို့သဘောနျော..” ဆိုပွီး ကမြလညျး လေးဘကျထောကျပေးလိုကျတယျ။ သူကလညျး သူ့လီးနီတြာတြာကွီးကို ကမြစောကျပုတျထဲ ထိုးလိုကျ တာ လြောကနဲ ဝငျသှားတာပါပဲ။ သူက နောကျကနေ ကမြ စောကျပတျလေးကို လိုးရငျး နို့ကလေးတှကေို လှမျးဆှဲထား တယျ။ ပွီးတော့ သူလညျး အကွာကွီး စောငျ့စောငျ့ပွီး လိုးနလေိုကျတာမြား ဘယျလိုကောငျးမှနျးကို မသိဘူး။ ကောငျးလှနျးလို့ တျောတျောကွာကွာလိုးပွီးပွနျတော့ ၂ ယောကျလုံး မောနပွေီ။ လိုးလို့ကလညျး ကောငျးတုနျးလေ။ ဒီတော့မှ တခါ ကမြက လှဲအိပျပွီး သူက ကမြအပျေါတကျပွီး ကမြရဲ့ ခွထေောကျလေး ၂ ခြောငျးကို ဖွဲကားလိုကျတယျ။
ကမြရဲ့ စောကျပတျလေးက ပွဲပွီး ဖေါငျးနတေော့တာပေါ့။ အကွာကွီး လိုးထားတော့ ကမြရဲ့ စောကျပတျ အနားသားလေးတှကေလညျး ခပျဟဟလေးဖွဈနပွေီး ကိုကို့လီး တောငျတောငျကွီးနဲ့ လိုးပါတော့လို့ ဖိတျချေါသလို ဖွဈနတေယျလေ။ ကိုကိုကလညျး ကမြရဲ့ စောကျပတျလေးထဲ သူ့လီးကွီးနဲ့ စှပျကနဲ ထိုးလိုကျတယျ။ ကမြရဲ့ စောကျခေါငျးထဲမှာ ပွညျ့တငျးပွီး ကောငျးလိုကျတာ။ တကယျကို ကောငျးတာပါ။ အရမျးခံလို့အကောငျးဆုံးအခြိနျပေါ့။ ကိုကိုကလညျး ကမြစောကျပတျထဲ သူ့လီးကွီးဝငျတာနဲ့အခြိနျဆှဲမနတေော့ပဲ တခါတညျး စောငျ့စောငျ့ပွီးတော့ကို လိုးပါတော့တယျ။ သူ့လီးကွီးကလညျး ကမြစောကျပတျထဲ ဝငျလိုကျ ထှကျလိုကျနဲ့..။ တဖွညျးဖွညျး ကမြလညျး ခံရတာ ကောငျးလှနျးလို့ ပွီးခငျြလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့. ”အား.. ကိုကိုရယျ.. ကောငျးလိုကျတာ.. လိုးလိုး..နာနာလိုးနျော” ”အငျး လိုးမယျ လိုးမယျ.. ခဈြရဲ့ စောကျပတျလေးကို တအားလိုးတော့မယျနျော” ”လိုး ကိုကိုရေ.. ခဈြတော့ အရမျးကောငျးနပွေီ..” ”အငျး.. ခဈြရဲ့ စောကျပတျလေးကို တအားစောငျ့ပွီးလိုးပွီကှာ.” ”လိုး.. လိုး.. အားရပါးရလိုး..” ”လိုးနပွေီနျော။
တအားလိုးနပွေီ.. ကိုကို့လီးကွီးနဲ့ အရမျးကို လိုးနပွေီနျော..” ”အား.. အား.. ကောငျးလိုကျတာ ကိုကိုရယျ.. အရမျးလိုးနျော.. ”အငျး. လိုးတယျ.. အရမျးလိုးတယျ.. ကောငျးလိုကျတာခဈြရယျ..” ဆိုပွီး သူက တအားတအားကို စောငျ့စောငျ့ပွီး လိုးလိုကျတာ ကမြမှာ ပွီးခငျြလာတာမို့.. ကိုကို့ကို.. ”အား.. ကိုကို.. မွနျမွနျလိုး.. လိုး.. လိုး.. ‘ ”အငျး.. လိုးမယျ.. တအားစောငျ့လိုးမယျ.. ”အား” ‘အား.. ကောငျးလိုကျတာခဈြရယျ.. ပွီးတော့မယျနျော..” ”အငျး ခဈြလဲ ပွီးတော့မယျ.. လိုးလိုး… ” ဆိုပွီး ကမြလညျးအျောလိုကျမိတော့တယျ။ ကိုကိုကလညျး အတငျးစောငျ့စောငျ့ပွီးလိုးလိုကျတာ ကမြလညျး အရမျးကောငျးလို့ မထိနျးနိုငျတော့ပဲ ကမြစောကျ ပတျထဲက စောကျရညျတှေ ထှကျကုနျပါတော့တယျ။ ကိုကိုကလညျး တဖွနျးဖွနျးနဲ့ သူ့ထီးထဲက သုတျရတှေေ အမြားကွီး ထှကျလာပွီး ကမြရဲ့ စောကျပတျလေးနဲ့ ကိုကို့လီးတို့ လိုးတာ ပွီးသှားပါတော့တယျ။ အမလေး လိုးလို့လညျး ပွီးရော ကမြတို့မှာ ဖတျဖတျကို မောသှားတော့တာပေါ့။ ဒါနဲ့ ရပွေနျခြိုးကွ၊ ကိုကိုဝယျလာတဲ့ စားသောကျစရာတှကေို စားလိုကျကွနဲ့ အမောပွတေော့ နောကျတခြီ၊ တရေး အိပျပွီး နောကျတခြီ၊ မိုးလငျးတော့ နောကျတခြီ.. လိုးလိုကျကွ စားလိုကျကွ အိပျလိုကျကွနဲ့ တနင်ျလာနမေ့နကျကမြှပဲ ကမြ တို့ရဲ့ အခဈြပွိုငျပှဲကွီး အဆုံးသတျပါတော့တယျ။ ညကရြငျ ပွနျလာမယျ့အခနျးဖျေါ သူငယျခငျြးနဲ့ ကိုကိုနဲ့ ခဈြကွတာတှေ ပွနျပွော၊ သူကလညျး သူ့ရဲ့ အလိုးခံခဲ့တာတှေ ပွနျပွောကွနဲ့ စားမွုံ့ပွနျကွရဦးမယျလေ.. . ပွီး….
ကျမဟာ ကိုကို့ကို သိပ်ချစ်တယ်။ အသည်းထဲစွဲအောင်ကို ချစ်တာရှင့်..။ ကိုကိုက သိပ်ကြင်နာတတ်တာလေ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျမက အချစ်ပိုရတာပေါ့..။ ကိုကို့ကို ကျမက အမြဲတမ်း တမ်းတနေတာ။ သတိရနေတာ..။ လွမ်းနေတာ..။ ကိုကိုနဲ့ မတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေဆို ရင် ကိုကိုနဲ့ ချစ်ကြတာတွေ ပြန်တွေးပြီး ရင်ထဲမှာ လှိုက်ဖိုလာရော..။ ကိုကိုနဲ့ ချစ်ကြတာတွေကလည်း သိပ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာ..။ သိပ် အားရ ကျေနပ်စရာလည်း ကောင်းတယ်လေ..။ ကျမက သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူနေတယ်။ သူကလည်း သူ့ရည်းစားဆီကို ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို သွားနေတာများတယ်။ သောကြာနေ့ည ဆို သူက သူ့ရည်းစားဆီသွားပြီ။ တနင်္လာနေ့ကျမှ သူက ပြန်လာတာ..။ သူကလည်း သူ့ရည်းစားအိမ်မှာ နှစ်ပါးသွား။ ကျမကလည်း ကျမ ကိုကိုနဲ့ နှစ်ပါးသွားကြတာလေ..။ သောကြာနေ့ညဆို ကျမရဲ့ ကိုကိုက ရောက်လာပြီ။ နှစ်ယောက်သား ချစ်ဗျူဟာတွေ ခင်းကြတာများ.. အားရပါးရပေါ့။ ကျမရဲ့ အခန်းဖေါ်နဲ့ တနင်္လာနေ့ညဆိုရင် သူ့အတွေ့အကြုံ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်ကြတာများ ပျော်စရာကြီး။ ။သူကလည်း သူ့ရည်းစားက သူ့နို့လေးကို ဘယ်လို ဆို့လိုက်တာ..။ အခုထိ နို့ကလေးတွေမှာ ရဲနေတာပဲ.. ဒီမှာကြည့်ပါဦးဆိုပြီး သူ့ နို့လေးနားမှာ သူ့ရည်းစား ကစ်စ် ထားလို့ ရဲရဲလေးတွေ ဖြစ်နေတာကို ပြတတ်တယ်။ ကျမကလည်း အားကျမခံပေါ့..။
အံမယ် ငါ့ကိုကိုက လည်း ငါ့ကို အချစ်ကြီးလိုက်တာ ဒီမှာတွေ့လားဆိုပြီး ပြန်ပြတာပေါ့။ တခါတလေများ အဲဒီလို ပြကြရင်း တယောက်နို့လေး တယောက်စမ်းကြည့် ပွတ်သက်ရင်း စိတ်တွေ ဖေါက်ဖေါက်လာလို့.. တကယ်ပါ.. သူ့စောက်ပတ်လေးကို ကျမက လျက်ပေးလိုက်.. ကျမ စောက်ပတ်လေးကို သူက လျက်လိုက်၊ ပွတ်လိုက်နဲ့.. တခါတလေများ စောက်ရည်လေးများ ကျလာတဲ့အထိပဲ…။ ထားပါတော့.. အဲဒီအကြောင်းကို နောက်မှ ပြောပြမယ်နော်။ အခုတော့ ကျမကိုကိုနဲ့ ကျမတို့အကြောင်းကိုပဲ ပြောမယ်။ အင်း… ကျန်တာတွေတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ သူနဲ့ကျမတို့ ချစ်ပွဲဝင် ချစ်ရည်လူးကြတာတွေပဲ ပြောတော့မယ်။ ရှင်တို့စိတ်ဝင်စားကြတာလဲ ဒါပဲ မ ဟုတ်လား။ ပြောပြမယ်။ နားထောင်နော်။ သောကြာနေ့ညဆို ကိုကိုရောက်လာပြီ။ ကိုကိုလာတဲ့အခါ များသောအားဖြင့် ကိုကိုက စားစရာတွေ ဝယ်လာကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို ကျမတို့တော့ ချက်ခြင်းမစားဖြစ်ပါဘူး။ ကိုကိုလာတာနဲ့ ကျမကို လှမ်းဖက်လိုက်တာပဲ..။ ‘ချစ်လေးရေ.. လွမ်းလှပြီကွာ.. ‘ ဆိုပြီး ကျမပါးလေးတွေကိုနမ်းလိုက်၊ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုနမ်းလိုက်။ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ကျမရဲ့နားကလေးတွေကို လျှာကလေးနဲ့ လျက်ပေးရင်း ကျမရဲ့ ရင်သားဖေါင်းအိအိလေးတွေဆီ ကိုကိုလက်က ရောက်လာတာပဲ။
ကျမက လည်း ကိုကိုလာရင် လိုးကြမယ် ဆိုတာကြောင့် အမြဲတမ်း ရေမိုးချိုးပြီးတာနဲ့ ညဝတ်အင်္ကျီ ပါးလေး ဝတ်ပြီး စောင့်နေတာလေ။ ဆိုတော့ အတွင်းခံတွေ ဘာတွေ ဘာမှ ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုကိုရောက်လာပြီး ကျမကို ဖက်လိုက်ပြီး အဲဒီလို နမ်းပြီး နို့ကလေးတွေကို ပွတ်သက်ရင်း ဖတ်ထားတဲ့အခါများ ကိုကို့လီးကြီးက ဂျင်းဘောင်းဘီကြားက ရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို လှမ်းထိနေပြီလေ။ အဲဒီကတည်းက ကျမကလည်း စိတ်တွေက ပါလာရော..။ နောက် ကျမကို ဖတ်ပြီး ကိုကိုက အခန်းထဲကို အနမ်းမပျက် ရွေ့သွားပြီး ကျမရဲ့ အိပ်ယာပေါ်ကို ပစ်လှဲလိုက်တယ်။ နောက် ကျမ ရဲ့ အင်္ကျီကို လှန်တင်ပြီး ကျမရဲ့ အိစက်ဖေါင်ြး<ွကနေတဲ့ နို့ကလေးတွေကို အငမ်းမရ စို့ပါလေရော။ ခပ်ဖွဖွလေး စုတ်လိုက်၊ လျှာကလေးတွေ နဲ့ ရင်သားတလျှောက် တို့ကစားလိုက်၊ နို့သီးခေါင်းကလေးကို ငုံစို့လိုက်နဲ့ လုပ်လိုက်ရင် ကျမမှာ အလိုးခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်လာရော။ ကိုကိုနဲ့ကျမက လိုးနေကျ လင်မယားတွေလို ဖြစ်နေတော့ ကျမကတော့ မရှက်တော့ပါဘူး။ ကိုကို့ဘောင်းဘီကြယ်သီးကို လှမ်းဖြုတ်ပြီး ကိုကို့ လီး နွေးနွေးလေးကို လှမ်းကိုင်လိုက်တာပဲ။ ကိုကိုကလည်း သူ့ဘောင်းဘီကို လျှောချ ချွတ်လိုက်ပြီး ကျမချစ်တဲ့ သူ့လီးကြီးကို ပေးကိုင်တာပဲ။ သူကလည်း ကျမစောက်ပတ်လေးကို လှမ်းထိလိုက်တယ်။ နောက် စောက်မွှေးလေးတွေပေါ်မှာ မထိတထိ တို့ကစားရင်း ကျမကို ဝတ်လစ် စလစ် ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်တာပဲ။ သူကလည်း အဲဒီအချိန်ဆို ဝတ်လစ်စလစ်ကြီးပဲလေ။ ကျမက ကိုကို့လီးကို သိပ်ကြိုက်တာ။ အင်းလေ.. မိန်းကလေးဆိုတာ မပြောရင်သာ ရှိမယ်။ လီးဆိုရင် ကြိုက်တာချည်းပါပဲ။ ယောက်ျား တွေလည်း ဒီအတိုင်းနေမှာပဲနော်။
စောက်ပတ်လေးများဆို သိပ်လိုးချင်ကြမှာပဲ။ ကျမကတော့ အရင်ဆုံး ကိုကို့လီးကို ပွတ်ကစားရင်း စိတ်တွေ ကြလာရင် ငုံချင် စုတ်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာရောလေ။ ကိုကိုကလည်း ကျမရဲ့ ပေါင်တံလေးတွေပေါ် သူ့လက်ကလေးတွေနဲ့ ပွတ်ကစားရင်း ကျမရဲ့ စောက်မွှေးလေးတွေကို တို့ထိလိုက်။ စောက်ပတ်လေးကို ခပ် ဖွဖွလေး အုပ်ရင်း ပွတ်ပေးလိုက်နဲ့..။ သူ့လီးကြီးကလည်း တောင်နေတာပဲ..။ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါ ကိုကိုက လှဲအိပ်ပြီး ကျမက သူ့အပေါ် ခွထိုင်ပြီး သူ့လီးကို လှမ်းစုတ်လိုက်တာပဲ။ ကျမရဲ့ စောက်ပတ် ဖေါင်း ဖေါင်းလေးတွေကလည်း ကိုကို့မျက်နှာနားရောက်နေပြီလေ..။ ”ချစ်ရယ်.. ချစ် စောက်ပတ်လေးက သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ဒီစောက်ပတ်လေးကို မှုတ်ချင်လှပြီကွ..’ ဆိုပြီး ကျမစောက်ပတ်ကလေး တွေကို သူ့လျှာလေးနဲ့ လှမ်းလျက်ပါလေရော။ လျှာနုနုလေးတွေနဲ့ ကျမ စောက်ပတ် အနားလေးတွေတလျှောက် မွှေကစားလိုက်ရင် အမလေး အသည်းထဲ အေးကနဲ အေးကနဲပေါ့ရှင်။ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိဘူး။ နောက် ကိုကိုက သူ့လက်လေး ၂ ဖက်နဲ့ ကျမရဲ့ စောက်ပတ် အနားလေးတွေကို ဖြဲပြီး စောက်စိလေးကို လျှာကလေးနဲ့ လှမ်းလှမ်း ထိုးလိုက်ရင် အသည်းထဲ အေးကနဲကို ဖြစ်သွားပြီး ကျမမှာ မြောက်တက်သွားသလား ထင်ရတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ ကျမကလည်း ကိုကိုရဲ့ လီးကြီးကို ပွတ်ပေးရင်း လီးကြီးရဲ့ အရည်ပြားလေးကို စွဲချပြီး ပြောင်ပြီး မာနေတဲ့ ဒစ်ကြီးကို လျှာကလေးနဲ့ ဖွဖွလေး လိုက်တို့ ကစားလိုက် တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ လီးကြီးကို ဆုပ်နယ်ပြီး အထက်အောက် ကစားပေးရတာလည်း တမျိုးကောင်းတာပဲ။ သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ထားရင်း အသည်းယားလာတာမို့ လက်တဖက်နဲ့ ခပ်တင်းတင်းလေး ဖိဆုပ်ပြီး အောက်ကို ဆွဲချလိုက် အထက်ကို ပြန်တင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးတယ်။
လီးထိပ် အသားနုနု နီတာရဲလေးကိုတော့ ကျမမှာ ငုံထားရတာ တကယ့်အရသာပါပဲ။ သူ့လီးကြီးတောင်နေတာကို ကျမက လျာကလေးနဲ့ ငုံ လျက်ပေးလိုက်ရင် သူလည်း ”အား.. ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ.. ချစ်က သိပ်ကောင်းတာပဲ.. အဲဒီလို ကိုကို့လီးကို မှုတ်ပေးတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ.. အား.” ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပဲလေ။ ပြောလည်းပြောရင်း ကျမစောက်ပတ်ကိုလည်း မှုတ်ရင်းပေါ့။ ကျမကလည်း သူ အဲဒီလိုပြောပြီး ကျမစောက်ပတ်လေးထဲ လက်ကလေးသွင်းပြီး စောက်စိကို လျှာကလေးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး များ ကစားလိုက်ရင် အရမ်းကောင်းသွားလို့. ”အို.. အား.. အား… ကောင်းလိုက်တာ.. ကိုကိုရယ်.. အမလေး.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးက ကောင်းလားဟင်” လို့ ပြန်မေးမိရော ကိုကိုကလည်း.. ”ချစ်ရယ်.. အရမ်းကောင်းတာပဲ.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ် အနားလေးတွေကလည်း လှလိုက်တာ.. အထဲက အသားလေးတွေကလည်း ပန်းနုရောင်လေးတွေ.. နုဖတ်ပြီး စောက်ရေကျဲကလေးတွေနဲ့ လျှက်လိုက်ရတာ အရသာ သိပ်ရှိတာပဲ.. အကြာကြီး လျက်ပါရစေဦးနော်.. ” ”အို.. ကိုကိုကလဲ… ” ”’လျက်လို့ မဝလို့ပါကွာ.. ချစ်စောက်ပတ်လေးက သိပ်ကောင်းတယ်” ”ပိုပြီ.. သူများစောက်ပတ်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဟာကို” ”အို.. မတူဘူးကွ.. ကိုကို လိုးခဲ့ဖူး၊ မှုတ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ စောက်ပတ်တွေထဲမှာ ချစ်ရဲ့စောက်ပတ်လေးကို လျှက်ပေးရတာလည်း သိပ် ကောင်းတယ်။ လိုးရတာလည်း အရမ်းကို ကောင်းတာ..” တဲ့လေ တကယ်တော့ ဒီအချိန်မျိုးမှာ ဒီလိုအတွေမျိုးရှိတာ အကောင်းဆုံးမဟုတ်လား။ ကြားရတာ သိပ်ကောင်းတာပဲလေ။ ဒါကြောင့် ကျမ ကလည်း အလိုက်သတိနဲ့.. ”ချစ်ကတော့ ကိုကို့လီးကိုပဲ အလိုးခံဖူးတာနော်။ ကိုကို့လီးနဲ့ အလိုးခံရရင် အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီ…” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တာပဲ။ တကယ်တော့ တခြား ဘယ်လောက်ပဲ အလိုးခံခဲ့ဖူးဖူး လက်ရှိလိုးပေးမယ့်သူ စိတ်ချမ်းသာဖို့ ပြောရတာပဲလေ။
ဒါမှ ၂ ယောက်လုံး ပိုပြီး ကာမ အရသာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခံစားရမှာပေါ့နော်။ ဒီလိုနဲ့ ကျမတို့က အပြန်အလှန် မှုတ်ပေးကြပြီးရင် ကိုကို့လီးကြီးနဲ့ ကျမစောက်ပတ်တို့ လိုးချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်လာရောလေ။ အဲဒီအခါ ကိုကို ကျမအပေါ်ကို တက်လိုက်ရော။ ကျမကလည်း အလိုက်သင့် ပေါင်ကလေးကို ဖြဲပေးတာပေါ့။ ကိုကို လိုးချင်စိတ်တွေ ပိုဖြစ်လာအောင်လည်း.. ”ကိုကို.. လိုးတော့ကွာ… ခံချင်လာပြီ..” ”အင်း.. လိုးမယ်နော်.. ချစ်.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲကို ကိုကို့လီးကြီးထည့်လိုက်မယ်နော်..” ”အင်း.. ထည့်လိုက်နော်.. ကိုကို့လီးကြီးက တောင်နေတာပဲကွာ..’ ”အင်းလေ.. အဲဒါ ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို အရမ်းလိုးချင်လို့ပေါ့..” ”ကိုကို့လီးကြီးက သိပ်ကောင်းတာပဲ.. ချစ်တော့ အရမ်းစွဲနေပြီကွာ..” ”ကိုကိုလည်း အတူတူပဲကွ.. ချစ်စောက်ပတ်လေးထဲကို ကိုကိုလီးကြီး ထည့်လိုက်မယ်နော်” ”အင်း.. ထည့်လိုက်.. အမလေး.. ”အား.. ရှီး.. ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ်.. အထဲကို ဝင်သွားပြီ” ”အင်း.. ကိုကို့လီးထိပ်ကြီးက ချစ်ရဲ့စောက်ပတ်ထဲ ရောက်နေပြီကွ..” ”အို.. အား.. ကိုကို့လီးကြီးကလည်း အပြင်ကထက် ပိုပြီး ကြီးလာသလိုပဲ” ”အပြင်ကထက်..” ”အင်းလေ… ချစ်စောက်ပတ်ထဲမှာ ကိုကို့လီးကြီးဝင်နေတာ တင်းကျပ်နေတာပဲကွာ..” ”ချစ် .. နည်းနည်း ထပ်သွင်းလိုက်ပြီကွာ…” ”အိုး… အမလေး.. အား.. ကောင်းလိုက်တာ.. ထည့်ထည့်. .. အဆုံးထိသာ ထည့်လိုက်ကွာ.. အရမ်းကောင်းတယ် အမလေး..” ”အား…. ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ… စပြီး လိုးတော့မယ်နော်..” ”အင်း.. လိုး.. ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး လိုးနော်…” ”အင်း…. အား… ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ..”’ အဲဒီလိုတွေ ပြောပြီး ကိုကိုက ကျမ စောက်ပတ်ကို စလိုးတော့တာပဲ။
သိပ်ကောင်းတယ်။ တကယ်ပဲ ဒီလောက် ကောင်းတဲ့ စည်းစိမ် ဘယ်ရှိမလဲနော်။ ကိုကိုက လိုးရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပိုမြန်လာတဲ့အခါ ကျမလည်း စောက်ပက်လေးထဲ သူ့လီးကြီး များများဝင်အောင် ပေါင်ကို ကျယ်ကျယ်လေး ကားပေးတာပေါ့။ သူကလည်း အပေါ်ကနေ စောင့်လိုးနေတာ အားမရလို့လားမသိဘူး။ ကျမရဲ့ နို့ နှစ်ဖက်ကိုလည်း လှမ်းကိုင်ပြီး စောင့်စောင့်လိုးတော့တာပဲ။ အားရပါးရကို လိုးတာ။. ကျမလည်း ခံလို့ကောင်းလိုက်တာ ပြော မနေနဲ့..။ ”အား.. အရမ်းလိုးချင်တယ်ကွာ။ အရမ်းလိုးနေတယ်နော်” ”အင်း. လိုး.. လိုး.. ဒီစောက်ပတ်လေးက ကိုကို့အတွက်နော်..။ တသက်လုံး လိုးမှာလား..” ”လိုးမှာပေါ့ ချစ်ရ.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို လိုးရတာ ဘယ်တော့မှ အား၇တယ်မရှိဘူး..” ”ကဲ.. ဒါဆို အားရပါးရလိုးနော်” ”လိုးမယ်.. လိုးမယ်.. ဒီတချီပြီးသွားရင် နောက်တချီ လိုးမယ်။နောက်တချီ ပြီးရင် နောက်တချီနော်..” ”ဘာလုပ်မှာလဲ ကိုကိုရဲ့..” ”လိုးမှာလေ.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်ကို ကိုကို့ရဲ့ လီးကြီးနဲ့ အားရပါးရ လိုးမယ်ကွာ..” ”အား.. လိုး ကိုကို လိုးသာလိုး. ကိုကို့လီးကြီးနဲ့ လိုးလို့ကတော့ ချစ်က အမြဲတမ်း ခံမယ်နော်။ ကိုကိုစိတ်တိုင်းကျ လိုးနော်..” ”အား.. ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ.. ” လို့ ပြောရင်း ကျမရဲ့ ပေါင်တဖက်ကို သူ့ပုခုံးပေါ် ထမ်းရင်း သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမရဲ့ စောက်ပတ်ကို တဖုတ်ဖုတ်နဲ့ လိုးပါလေရော..။ ခံလို့ကောင်းလိုက်တာရှင်..။ နောက်တော်တော်ကြာတော့ သူလည်း မောလာတာပေါ့။ အဲဒီအခါ ”ကိုကို မောနေပြီလား။ ချစ် အပေါ်က တက်စောင့်ပေးမယ်နော်..” ”အင်း.. အဲဒီလို အလိုက်သိတတ်လွန်းလို့ ချစ်ကို ပိုပြီးချစ်ရတာ..” လို့ သူက ပြောရင်း ကျမပါးလေးကို နမ်း၊ နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းရင်း ဘေးမှာ လှဲအိပ်လိုက်တယ်။
ဒီတော့ ကျမ လည်း သူ့အပေါ် ခွတက်လိုက်ပြီး အပေါ်ကို ထောင်နေတဲ့ သူ့လီးတောင်တောင်ကြီးကို လှမ်းကိုင်ပြီးကျမရဲ့ စောက်ပတ်နဲ့ တေ့ပြီး ထိုင်ချလိုက်တယ်။ သူ့လီးကြီးက ကျမရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကို စွပ်ကနဲ ဝင်သွားပါလေရော..။ ‘အား.. ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရာ..” ‘ကိုကို.. ချစ်လိုးတော့မယ်နော်..” ”လိုး.. လိုး.. အားရပါးရလိုး.. အပေါ်က တအားသာ စောင့်နော်..” ”အင်း. စောင့်မယ်… ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးနဲ့ ကိုကိုလီးကြီးပေါ်ကို တအား စောင့်လိုးမယ်ကွာ..” ”အင်း.. လိုးသာလိုး ချစ်..” ဆိုပြီး ကျမလည်း သူ့လီးကြီးအပေါ်မှာ ခွထိုင်ပြီး တစွပ်စွပ်နဲ့ စောင့်ပေးလိုက်တယ်။ သူကလည်း အောက်မှာ ဇိမ် တွေ့နေတဲ့အပြင် ကျမရဲ့ နို့ကလေးတွေ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ ဖြစ်နေတာကို လှမ်းလှမ်းဆွဲလိုက်သေးတယ်။ ကျမလည်း စိတ်ရှိ လက်ရှိ အားရပါးရ သူ့လီးကြီးပေါ် စောင့်စောင့်ပြီး လိုးပစ်လိုက်တယ်။ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ကျမလည်း စောင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ စောင့်လိုက်တာ အဲယားကွန်းဖွင့်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ ချွေး ပြန်တဲ့အထိပဲ။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျမလည်း မောပြီး ကိုကို့အပေါ် လှဲအိပ်လိုက်တယ်။ ကိုကိုကလည်း ကျမကို လှမ်းဖက် ထားပြီး ဘေးကိုစောင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ”နောက်ကနေ လိုးဦးမယ်ချစ်ရာ.. ဖင်ကုန်းပေးထားနော်..” ”အင်း.. ကိုကို့သဘောနော်..” ဆိုပြီး ကျမလည်း လေးဘက်ထောက်ပေးလိုက်တယ်။ သူကလည်း သူ့လီးနီတျာတျာကြီးကို ကျမစောက်ပုတ်ထဲ ထိုးလိုက် တာ လျောကနဲ ဝင်သွားတာပါပဲ။ သူက နောက်ကနေ ကျမ စောက်ပတ်လေးကို လိုးရင်း နို့ကလေးတွေကို လှမ်းဆွဲထား တယ်။ ပြီးတော့ သူလည်း အကြာကြီး စောင့်စောင့်ပြီး လိုးနေလိုက်တာများ ဘယ်လိုကောင်းမှန်းကို မသိဘူး။ ကောင်းလွန်းလို့ တော်တော်ကြာကြာလိုးပြီးပြန်တော့ ၂ ယောက်လုံး မောနေပြီ။ လိုးလို့ကလည်း ကောင်းတုန်းလေ။ ဒီတော့မှ တခါ ကျမက လှဲအိပ်ပြီး သူက ကျမအပေါ်တက်ပြီး ကျမရဲ့ ခြေထောက်လေး ၂ ချောင်းကို ဖြဲကားလိုက်တယ်။
ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးက ပြဲပြီး ဖေါင်းနေတော့တာပေါ့။ အကြာကြီး လိုးထားတော့ ကျမရဲ့ စောက်ပတ် အနားသားလေးတွေကလည်း ခပ်ဟဟလေးဖြစ်နေပြီး ကိုကို့လီး တောင်တောင်ကြီးနဲ့ လိုးပါတော့လို့ ဖိတ်ခေါ်သလို ဖြစ်နေတယ်လေ။ ကိုကိုကလည်း ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲ သူ့လီးကြီးနဲ့ စွပ်ကနဲ ထိုးလိုက်တယ်။ ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲမှာ ပြည့်တင်းပြီး ကောင်းလိုက်တာ။ တကယ်ကို ကောင်းတာပါ။ အရမ်းခံလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပေါ့။ ကိုကိုကလည်း ကျမစောက်ပတ်ထဲ သူ့လီးကြီးဝင်တာနဲ့အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ တခါတည်း စောင့်စောင့်ပြီးတော့ကို လိုးပါတော့တယ်။ သူ့လီးကြီးကလည်း ကျမစောက်ပတ်ထဲ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့..။ တဖြည်းဖြည်း ကျမလည်း ခံရတာ ကောင်းလွန်းလို့ ပြီးချင်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်. ”အား.. ကိုကိုရယ်.. ကောင်းလိုက်တာ.. လိုးလိုး..နာနာလိုးနော်” ”အင်း လိုးမယ် လိုးမယ်.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို တအားလိုးတော့မယ်နော်” ”လိုး ကိုကိုရေ.. ချစ်တော့ အရမ်းကောင်းနေပြီ..” ”အင်း.. ချစ်ရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို တအားစောင့်ပြီးလိုးပြီကွာ.” ”လိုး.. လိုး.. အားရပါးရလိုး..” ”လိုးနေပြီနော်။
တအားလိုးနေပြီ.. ကိုကို့လီးကြီးနဲ့ အရမ်းကို လိုးနေပြီနော်..” ”အား.. အား.. ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်.. အရမ်းလိုးနော်.. ”အင်း. လိုးတယ်.. အရမ်းလိုးတယ်.. ကောင်းလိုက်တာချစ်ရယ်..” ဆိုပြီး သူက တအားတအားကို စောင့်စောင့်ပြီး လိုးလိုက်တာ ကျမမှာ ပြီးချင်လာတာမို့.. ကိုကို့ကို.. ”အား.. ကိုကို.. မြန်မြန်လိုး.. လိုး.. လိုး.. ‘ ”အင်း.. လိုးမယ်.. တအားစောင့်လိုးမယ်.. ”အား” ‘အား.. ကောင်းလိုက်တာချစ်ရယ်.. ပြီးတော့မယ်နော်..” ”အင်း ချစ်လဲ ပြီးတော့မယ်.. လိုးလိုး… ” ဆိုပြီး ကျမလည်းအော်လိုက်မိတော့တယ်။ ကိုကိုကလည်း အတင်းစောင့်စောင့်ပြီးလိုးလိုက်တာ ကျမလည်း အရမ်းကောင်းလို့ မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ကျမစောက် ပတ်ထဲက စောက်ရည်တွေ ထွက်ကုန်ပါတော့တယ်။ ကိုကိုကလည်း တဖြန်းဖြန်းနဲ့ သူ့ထီးထဲက သုတ်ရေတွေ အများကြီး ထွက်လာပြီး ကျမရဲ့ စောက်ပတ်လေးနဲ့ ကိုကို့လီးတို့ လိုးတာ ပြီးသွားပါတော့တယ်။ အမလေး လိုးလို့လည်း ပြီးရော ကျမတို့မှာ ဖတ်ဖတ်ကို မောသွားတော့တာပေါ့။ ဒါနဲ့ ရေပြန်ချိုးကြ၊ ကိုကိုဝယ်လာတဲ့ စားသောက်စရာတွေကို စားလိုက်ကြနဲ့ အမောပြေတော့ နောက်တချီ၊ တရေး အိပ်ပြီး နောက်တချီ၊ မိုးလင်းတော့ နောက်တချီ.. လိုးလိုက်ကြ စားလိုက်ကြ အိပ်လိုက်ကြနဲ့ တနင်္လာနေ့မနက်ကျမှပဲ ကျမ တို့ရဲ့ အချစ်ပြိုင်ပွဲကြီး အဆုံးသတ်ပါတော့တယ်။ ညကျရင် ပြန်လာမယ့်အခန်းဖေါ် သူငယ်ချင်းနဲ့ ကိုကိုနဲ့ ချစ်ကြတာတွေ ပြန်ပြော၊ သူကလည်း သူ့ရဲ့ အလိုးခံခဲ့တာတွေ ပြန်ပြောကြနဲ့ စားမြုံ့ပြန်ကြရဦးမယ်လေ.. . ပြီး….